အိန္ဒိယ: "ပလပ်စတစ်တစ်ခုတည်းအသုံးပြုမှုအဖြစ်ထုပ်ပိုးရေပုလင်းများ၏ခွဲခြားအဆိုပါ 30 000 ကုဋေစက်မှုလုပ်ငန်း impact ပါလိမ့်မယ်" | အိန္ဒိယသတင်း - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ "အိန္ဒိယ:" ပလပ်စတစ်တစ်ခုတည်းအသုံးပြုမှုအဖြစ်ထုပ်ပိုးရေပုလင်းများ၏ခွဲခြား "ဟုအဆိုပါ 30 000 ကုဋေစက်မှုလုပ်ငန်း impact လိမ့်မယ် | အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ: "ပလပ်စတစ်တစ်ခုတည်းအသုံးပြုမှုအဖြစ်ထုပ်ပိုးရေပုလင်းများ၏ခွဲခြားအဆိုပါ 30 000 ကုဋေစက်မှုလုပ်ငန်း impact ပါလိမ့်မယ်" | အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ: အဆိုပါသောက်သုံးရေကဏ္ဍတနင်္လာနေ့ခြွင်းချက်သူတို့ပေပုလင်းကိုအသုံးပြုကြောင်းအစိုးရ Single-အသုံးပြုမှုပလပ်စတစ် (sup) အဖြစ်ခွဲခြားနှင့်ကဏ္ဍအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆန့်ကျင်သတိပေးခဲ့သည်မဖြစ်သင့်ဟုဆိုသည် 30 000 ကုဋေမျှအခြားရွေးချယ်စရာချက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ပါ။ သူတို့ဟာ 7,5 သန်းတန်ဖိုးရှိသိန်းရူပီးတစ်ခုလုံးကိုပေပုလင်းစက်မှုလုပ်ငန်းကဆိုသည်။
စားသုံးသူများဝန်ကြီးကသဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်တဲ့အစည်းအဝေးမှာစက်မှုလုပ်ငန်း၏ရပ်တည်ချက်ကို သိုးထီး Vilas Paswan အစိုးရကပိတ်ပင်ထားသို့မဟုတ် phased လာမယ့်တစ်ပတ်ပစ္စည်းများကိုပိုမို sup စာရင်းပေးနေချိန်မှာရာအရပျကိုယူ။ ပြင်ပမှာ။ အစိုးရအရာရှိများလည်းအိန္ဒိယတွင် sup မရှိနှင့်အဓိပ္ပါယ်လက်ရှိတွင်လည်းမရှိကြောင်းဝန်ခံကြပါပြီ။
စက်မှုလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များခုနစ်ကုဋေလူမျိုးကိုစိုးတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်ပတ်သက်သည်လို့ပလပ်စတစ်ရေဗူးပေါ်မဆိုပိတ်ပင်မှုပြင်းထန်သောအကျိုးဆက်များရှိလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ "သောက်ရေပုလင်းပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီးသူတို့ထဲကနီးပါး 60% အိန္ဒိယ၌ရှိကြ၏" သူတို့ Paswan သို့ပြောသည်။
သို့သော်ပတ်ဝန်းကျင်န်ကြီးဌာနအနေဖြင့်အရာရှိများကအစိုးရသက်ရောက်မှုကိုသတိပြုမိခဲ့သည့်အခါ sup ဒြပ်စင်များ၏အနုတ်လက္ခဏာစာရင်း၏ကြေညာချက်အားလုံးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသူကဆိုသည်။
Paswan သည့် Tetra ရေဖြစ်နိုင်သောခဲ့ရှိမရှိတစ်အဆိုပြုချက်ကိုရှိကွောငျးကိုဖြည့်စွက်, လာမယ့်သုံးရက်နေစဉ်အတွင်းအကြံပြုချက်များဖြစ်စေခြင်းငှါစက်မှုလုပ်ငန်းဟုမေးခဲ့သည်။ "ဒါပေမယ့်ဒီကလူကမြင်တွေ့နိုင်အောင်အားလုံးသောက်သုံးရေပုလင်း၏ 85% ပွင့်လင်းကြသည်လိုအပ်သောအစားအစာများ၏ထိန်းညှိခြင်းဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောစံချိန်စံညွှန်းများအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခု, FSSAI လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ... ငါညစ်ညမ်းမှုများနှင့်အမျိုးမျိုးသောမှအယူခံချင် ပလတ်စတစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရောဂါများ။ recycling အနေနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာရှိသော်လည်းအမြဲတမ်းဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအမြဲတမ်းဖြေရှင်းချက်ပလပ်စတစ်အစားထိုးဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။
အစိုးရရုံးတွေအတွက်ပလပ်စတစ်ပုလင်းကို အသုံးပြု. အပေါ်ပိတ်ပင်ထားမှုအလားအလာဖြစ်ပါတယ်သော်လည်းသတင်းရပ်ကွက်များအဆိုအရ, က, ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များအတွင်းရှိထုပ်ပိုးပုလင်းရေများရောင်းချမှုအားဤစံတိုးချဲ့ဖို့ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ဘူတာနှင့်တဲ့အခါမှာလူတွေရွှေ့။
တစ်ဦးကအစိုးရအရာရှိတဦးကကကောင်းတစ်ချိန်ခွင်လျှာဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ သငျသညျစနစ်တကျပေပုလင်းပြန်သုံးလျှင်, သင်ဒုတိယအကြိမ်အဘို့ထိုသူတို့သုံးနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးပြန်လည်ပြီးနောက်သူတို့ကိုရှောင်ရှားရန် သာ. ကောင်း၏။ သူအချို့ပွညျထောငျစု၏အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချရန်ခြေလှမ်းများယူကြပြီသူကဆက်ပြောသည် ပလပ်စတစ်ပုလင်း conditional ရေ။ ဥပမာအားဖြင့်, မဟာရပ်ရှ 200 ml, စဉ်အောက်မှာပိတ်ပင်ထားပလပ်စတစ်ရေဗူး Odisha 500 ml ထက်လျော့နည်း်ရှိသူများကိုပိတ်ပင်ခဲ့။
ဝမ်းနည်းကြောင်းများ၏: MESSAGE သူ၏ဘုန်းသည် IBK Roche ခရစ်ယာန် MARC Burkina Faso ၏ KABORE သမ္မတ STATE ၏ဦးခေါင်းကို
အိန္ဒိယ: Kamal Nath: Madhya Pradesh CM Kamal Nath ဆန့်ကျင်ပြန်ဖွင့်အဓိကရုဏ်း 1984 | အိန္ဒိယသတင်း
လီဗာပူးလ်မှ Sadio Mane က Jurgen Klopp က Mo Salah ၏တံတွေးထွေးမှုကို VIDEO နှင့်မည်သို့ဆက်ဆံခဲ့သည်ကိုရှင်းပြသည်